Sarkaal hore oo kashifay cidda ka dambeeysay jabsashada xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal hore oo kashifay cidda ka dambeeysay jabsashada xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranka
Mid ka mid ah saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Korneel C/nuur Jaamac Jookar ayaa si aan caadi ahayn u kashifay cidda rasmiga ah ee ka dambeysay jabsashada xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale, kaas oo ku yaalla xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Korneel C/nuur Jaamac Jookar ayaa isagoo wax caddeyn dheeraad ah aan ka bixin sheegay in arrintaas ay ka dambeeyeen shaqsiyaad ka tirsanaa dowladii uu madaxweyaha ka ahaaa Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ka howlgala xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya.
“Wax weyn ma aysan aheyn dhaca loo geystay xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranka Soomaaliya oo ku yaalla xarunta madaxtooyadda, raggii ka tirsanaa dowladii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo weli ku sugan xarunta madaxtooydda ayaa arrinkaasi ka dambeeyay, uljeedka ugu weyn ay arrinkaasi ka lahaayeen ayaa ahaa in dhibaato loo geysto dowladda cusub ee Soomaliya” Sidaasi waxaa yiri Korneel C/nuur Jaamac Jookar oo kamid ahaa saraakiishii hore ee dalka.
Dhinaca kale, ciidanka nabad-sugidda qaranka ee NISA ayaa dhowr qof u xir-xiray dhaca loo geystay xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranka, iyadoo uu weli socdo baaritaano ku saabsan cidda rasmiga ah ee arrinkaasi ka dambeysay, waxaana hadalka sarkaalkan hore uu u muuqdaa mid laab la kac ah oo aan wax caddeyn ah loo heynin.
Si kastaba ha ahaatee, xafiiska hanti dhowraha guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ku yaalla xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa waxaa lagala baxay dokumentiyo la sheegay inay u badnaayeen kuwa quseeya miisaaniyada dalka ee sanadihii 2015-ka iyo 2016-ka iyo sidoo kale warbixino kale ee uu hanti-dhowrka diyaarsaday.